Prize ကိုအရောင်းစက်များ | Arcade ရေး Simulator | ရွေးနှုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကလေးများ Arcade အားကစားပြိုင်ပွဲ | ဂန္ထဝင် Arcade စက်များ | Mini ကိုပန်းခြံစီးနင်း - ကွမ်ကျိုး LiFang အပန်းဖြေနည်းပညာလီမိတက်
LiFang FEC များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာအရင်းအမြစ်စင်တာဖြစ်ပါသည်, Arcade စင်တာ, အပန်းဖြေပန်းခြံနှင့် Arcade ဘား / ကဖီး, ငါတို့သည်လည်းထို site ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ် ...
LiFang တရုတ် Animation ရဲ့ & အပန်းဖြေပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိရာ - ကွမ်ကျိုး၏ Panyu ခရိုင်, ကျနော်တို့ကအကြွေစေ့ operated ဂိမ်းစက်ရဲ့သုတေသန & ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပေါင်းစပ်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု, အဓိကထုတ်ကုန်လက်သည်းရိန်းဂိမ်းစီးရီးများပါဝင်သည်, Arcade လက်ဆောင်တွေစက်စီးရီး, Arcade simulating ဂိမ်းစီးရီး, ရွေးနှုတ်ဂိမ်းစီးရီး, ကလေးတွေ Arcade ဂိမ်းစီးရီး, kiddie စီးနှင့် mini ပန်းခြံစီး, ထိုကဲ့သို့သော mini ကိုဝိုင်းလေးအဖြစ်, ကလေးတွေစီးလေ့ကျင့်, ဘမ်ကားတစ်စီး, တိရိစ္ဆာန်စီး, စသည်တို့ကို.
ကစားစရာခြေသည်းချီစက်စက် – အရူး Toy 2
ကလေးများ Arcade ဂြိုလ်သားဂွန်သေနတ်ပစ်ဂိမ်း
ကျနော်တို့ FEC များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဖြေရှင်းချက်ပူဇော်, Arcade စင်တာ, ကျပ်ကစားစရာအိမ်သူအိမ်သား, Arcade ဘားနှင့် Arcade ကဖီး, စသည်တို့ကို.
OEM SERVICE ကို
OEM ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုး, စက်ဒီဇိုင်းအပါအဝင်, စတစ်ကာဒီဇိုင်း, ဂိမ်းပုံစံဒီဇိုင်း.
ကျနော်တို့အပန်းဖြေဂိမ်းလယ်ပြင်၌ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုချင်သူ Customer များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်ပေး, အပန်းဖြေဂိမ်းလက္ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်.